भारतिय फ्यानलाई दुखको खबर !! स्मिथ, रुट र विलियम्सन किङ बिराट भन्दा अगाडि |
भारतिय फ्यानलाई दुखको खबर !! स्मिथ, रुट र विलियम्सन किङ बिराट भन्दा अगाडि
२०७४, १३ मंसिर बुधबार १०:१३ November 29, 2017 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सि (आईसिसी) ले नयाँ वरियता सार्वजनिक गरेको छ। भारत र श्रीलंकाबिचको दोस्रो तथा अस्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्डबिचको पहिलो टेस्ट पछि सार्वजनिक गरे टेस्ट वरियतामा अस्ट्रेलियाका कप्तान स्टिव स्मिथको दबदबा रहेको छ।
यो पनि पढ्नुस् : सचिन माथि हाबि भए स्टिभ स्मिथ, तोडे १८ बर्ष पुरानो रेकर्ड सचिनको रेकर्ड (फोटो फिचर)
वरियता अनुसार एसेज सिरिजको पहिलो खेलमा अविजित १४१ रन बनाएका स्टिव स्मिथ आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्दै ९४१ रेटिङ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। श्रीलंका बिरूद्दको दोस्रो टेस्टमा १४३ रन बनाएपछि २२ रेटिङ प्राप्त गर्दै चौथो स्थानमा रहेका चेतेश्वर पुजारा उनलाई पछ्याउदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। उनको नाममा अहिले ८८८ रेटिङ अंक छ।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका जोए रूटले एसेज सिरिजको दुई पारि मध्ये एउटामा १५ तथा अर्कोमा ५१ रन बनाएपछि तेस्रो स्थानमा झरेका छन्। उनको अहिले ८८१ रेटिङ अंक छ। यता न्युजिल्यान्डका केन विलियम्सन एक स्थान तल झर्दै चौथो स्थानमा पुगेका छन्।
श्रीलंकाविरूद्ध दोस्रो टेस्टमा २१३ रनको दोहोरो सतकीय पारी खेलेका भारतीय कप्तान विराट कोहली ८७७ रेटिङ अंकसहित पाचौं स्थानमा यथावत छन्। टेस्ट वरियतामा नम्बर ५ रहेका कोहली यता वानडे र टी-२० बरियतामा पहिलो स्थानमा छन्।
बलिङतर्फ इंग्ल्याण्डका जेम्स एण्डर्सन पहिलो स्थानमा यथाबत छन्। श्रीलंकाबिरुद्द ८४ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका रबिन्द्र जडेजा दोस्रो स्थानमा उक्लिए। दक्षिण अफ्रिकी कागीसो रवाडालाई तेस्रो स्थानमा झरेका छन्। टेस्ट क्रिकेटमा ३०० विकेट पुरा गरेका रबिचन्द्रन आश्विन ८४९ रेटिङ अंकसहित चौथो स्थानमा छन् ।
यो पनि पढ्नुस् : तिम्रो विर्यको मुल्य कति ?….सबै केटाहरूले एकचोटी हेर्नुहोला
वान डेमा शीर्ष स्थानमा रहेका विराट कोहलीको एकदिवसीय रेटिङ अंक ८८९ रहेको छ भने टी-२० क्रिकेटमा ८२४ रहेको छ। त्यस्तै बलरहरुमा पाकिस्तानका हसन अली ७५९ रेटिंग अंकसहित एकदिवसीय क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा छन् भने भारतका जस्प्रित बुम्राह ७२४ रेटिंग अंक सहित टी-२० क्रिकेटमा शिर्ष स्थानमा छन्। भारत टेस्ट वरियताको शीर्ष स्थानमा रहँदा दक्षिण अफ्रिका एकदिवसीयको तथा पाकिस्तान टी२० क्रिकेटको शिर्ष स्थानमा छन्। सेतो पाटीबाट